တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ကျမနှင့် ဆေးမြီးတို (၂)
Posted by မေဓာဝီ at 2:09 AM
ထုတ်လုပ်တဲ့ တိုင်းရင်းဆေးတွေကိုတော့ ဒီ့ထက်ပိုပြီး စနစ်တကျ ဓာတ်ခွဲ စစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ တိတိကျကျ လုပ်လာနိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ်။
အခုနောက်ပိုင်းမှာ တချို့လည်း capsule လေးတွေကို ကဒ်လေးတွေနဲ့ ထည့်ပြီး သပ်သပ်ရပ်ရပ် ထုတ်လာတာကို တွေ့ရတယ်။
Traditional Knowledge နည်းပညာတွေဟာ တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတောင် လျစ်လျူရှုမထားကြတဲ့ အရာပါ။
တိုးတက်တဲ့ အနာဂတ်တခုမှာ စနစ်တကျ စီမံမှုတွေနဲ့ ဆေးစွမ်းထက်လာကြရင်တော့ ကောင်းမှာပဲ။
3/27/2009 2:47 AM
မမေဆေးဗူးတွေထဲမှာ တူတာတော့..အစာဖျက်ဆေးနဲ့ ဆရာခိုလား -
ကတိသစ္စါ တည်သောခါ - ဆိုတာလည်း..အခုလို ငွေနောက်လိုက်နေရ- ဘောဘဇောတွေ အလိုလိုတက်နေရကြရတဲ့ ခေတ်ကြီး နဲ့ ကမ္ဘာကြီးညစ်နွမ်းလာမူ တွေ အားလုံးစုဆုံလာတာပဲ ထင်ပါရဲ့း
ဗမာတိုင်းရင်းဆေးတွေ သိက္ခာကျသလိုဖြစ်ရတဲ့ အဖြစ်အတွက်တော့..၀မ်းနဲမိတယ်။
အင်း..မြန်မာပြည်အေုကာင်း ကြားရတာလဲ ဘာမှကို မကောင်းပါလား အရပ်ကတို့.. ကောင်းတာလေး ရှာရေးပါဦး မမေ ခင်ဗျာ။ မြန်မာပြည်က ပညာရှငိုကီး တစ်ယောက်ပြောသလို ဆင်ရဲသားကား မရေးပါနဲ့လား.. အဲလေ .. မရိုက်ပါနဲ့လား လို့. ပြောရမလိုဖြစ်နေပြီ ..မောင်ုကီး
3/27/2009 5:30 PM
ဟီးဟီး...မမေ။ ဟန ခုဖျားနေတာ ကွမ်းရွက် ရှာဝယ်ပြီး ကွမ်းရွက်ပြုတ်ရည် သောက်ထားတာ။
3/27/2009 11:20 PM
ရှမ်းလူမျိုးဆိုတော့လေ မဟာဖြေဆေးလေးကတော့ လက်စွဲပေါ့။ အစာစားပြီးတိုင်း လျက်ဆားလိုပဲ သူ့ကို လျက်ဖြစ်တယ်..ခုထိပါပဲ။ သွားလေရာလည်းယူသွားတယ်..ဗူးလေးနဲ့ပေါ့။အင်း သူ့ကိုလည်း စနစ်တကျ ဓာတ်ခွဲ စစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ တိတိကျကျ စစ်ဆေးရင်ဘာတွေတွေ့အုံးမှာပါလိမ့်။ ရင်မောရပါလား။
3/28/2009 5:40 AM
စိတ် နဲ့လူနဲ့ညစ်ပ
ဒီမလေ အမိတို့ 
ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ အရပ်မှာ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ဘာရှိလဲ လေ့လာ ။ တန်သလောက် သုံးကြမှပေါ့ကွယ် ။ free ပေးနေတာမှ မယူတတ်ဘဲ လှည်းကြမ်းကြီးစီးနေချင်ရင်လဲ
အမိတို့ ဖင်မခံနိုင်အောင် ဆောင့်ကြပေအုံးတော့
3/28/2009 6:39 AM
မမေ.. ကျနော်လဲ မဟာဖြေဆေးကို အားကိုးပြီး နေ့-ည အစားတွေ သောင်းကျန်းနေတာ ခု ဗိုက်ုကီးကို စူလို့.. အဲ ဒီဆေး ရပြီးမှ အစားမှားမှာ မေုကာက်။ အစားများမှာ မေုကာက် ။ မဟာဖြေဆေးကို အားကိုးပြီး မိုက်နေတာ.. ဘယ်နေ့များ.... ဟိ ဟိ.. မောင်ုကီး
ဟုတ်တယ် ပန်ပန် ... သေချာ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ပြီးမှ ထုတ်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပေါ့။ မမေကတော့ capsule နဲ့ ဗမာဆေးဆိုရင် ခံစားလို့မရဘူး ဟီး။ capsule နံ့ကြီး မကြိုက်တာလဲပါတယ်။ သပ်သပ်ရပ်ရပ်တော့ ဖြစ်သွားတာပေါ့။
မကေရေ ... ဗမာတိုင်းရင်းဆေး သိက္ခာကျတာ တကယ်ပဲ စိတ်မကောင်းစရာပါ။ ဗမာတိုင်းရင်းဆေးကိုလဲ သေချာ သုတေသနလုပ်ပြီး ထုတ်လုပ်သင့်တယ် လို့ ထင်ပါတယ်။
ကိုမောင်ကြီးပြောသလို မကောင်းတာတွေချည်း ရှာကြံ ရေးနေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ မြင်တာကြားတာလေးတွေ ရေးမိတာပါ။ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားရင် စိတ်မကောင်းပါဘူးရှင်။
ကြည် ... ဟုတ်တယ် ... မဟာဖြေဆေးကို ကျမလည်း ကြိုက်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခုထိတော့ စားနေမိသေးတာပဲ။
ပြောချင်တာသာ ပြောပါတော့ ... ရိုးရာဆေးကိုတော့ဖြင့် ဖက်တွယ်နေမိပါသေးတယ်။
လှည်းခေတ်မှာ လှည်းစီး၊ ကားခေတ်မှာ ကားစီးပေမဲ့ ကိုယ့်ခြေထောက်ကိုယ်အားကိုးပြီး လမ်းလည်း လျှောက်တဲ့ အခါ လျှောက်သလိုပေါ့။ လှည်းလည်း လှည်းအလျောက် လှေလည်း လှေအလျောက် သူ့ဟာနဲ့သူတော့ ခရီးတွင်တာပဲ မဟုတ်လား။
ပြောချင်တာက အခုလို ကိစ္စမျိုးဖြစ်တာနဲ့ ဗမာတိုင်းရင်းဆေးကို ပစ်ပယ်ဖို့ မဟုတ်ဘဲ ဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းကိုရှာ၊ သုတေသနလုပ်၊ နောက်ထပ် မဖြစ်အောင်လို့ ကာကွယ်၊ ပြီးတော့ ကိုယ့်တိုင်းရင်းဆေးကို တိုးတက်အောင် ပြန့်ပွါးအောင် ပြုပြင်လုပ်ဆောင်စေချင်တာပါပဲ။
tint ဆိုသူဟာ ဒီပို့စ်မှာပါတဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ မိမိသဘောထား မတိုက်ဆိုင်သည့်တိုင်အောင် အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ လာရေးတဲ့ စကားလုံး အသုံးအစွဲကို ဆင်ခြင်သင့်တယ်လို့ မြင်တယ်။ မြန်မာတယောက် ဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက် သူ့ရိုးရာဆေးကို မမေ့တာဟာ အပြစ်တခု မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ မမေဓာဝီရဲ့ ဒီပို့စ်ရေးတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ tint ရဲ့ မှတ်ချက်က လားရာခြင်းက တခြားစီဖြစ်နေပါတယ်။
မေတို့ အိမ်မှာ တကယ် အပင်တွေ စုံနေတာပဲ…
နောက် မရှော့ရွက်ကလဲ အဆိတ်ပြေတယ်ဆိုပဲ… မေမေလဲ အစုံစိုက်တာ…
အမ ဒီတခေါက်ပြန်တော့ ထောလပတ်ပင်လေး မြန်မာပြည်က ယူခဲ့တာ… ဒီမှာ စိုက်တာရှင်တာ မေရေ… ပန်းတော့ မပွင့်သေးဘူး….
မေရေ… အဆုံးသတ်လေးက လှတယ်…
တကယ်တော့ အမတို့ နိုင်ငံမှာ ဆေးဘက်ဝင်တဲ့ သစ်ပင်တွေက အများသားနော်…
သုံးတတ်ဖို့ သာ လိုတာပေါ့လေ…
4/02/2009 6:18 AM
ဝဘေူဆရာတျောလကျြဆားဖျောနညျး သိပါရစေ ဒကာမကွီး
7/19/2021 7:50 AM